Resaky ny mpitsimpona akotry : mangigina fa tonga vahiny | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : mangigina fa tonga vahiny
Par Les Nouvelles sur 21/11/2016
Mandritra ny fotoana ampiantranoana vahiny, asa na mitombo ny isan’ny tranga sy ny fanao voarara na ny fampiomanana amin’ny fampiharana azy ireny amin’ny fomba hentitra izay ho tanterahina amin’ny fanaraha-maso akaiky ataon’ny mpitandro filaminana. Ho tsapa amin’izany fa ny fahanginan’ny tanàna raha vao milentika ny masoandro dia tsy mitory filaminana fa milaza fahatahorana. Ny mponina mihorohoro, ny fanjakana tsy mahay manidy ny ratsy any am-bala lasa mifehy ny olona hihidy aman-trano. Na fivarotana na trano fandrosoan-tsakafo na toerana fifalifalian’ny mponina dia terena hikatona avokoa raha vao mipaika ny amin’ny sivy alina. Izany moa any amin’ny tanàna ambany, ny afovoan-tanàna misy toerana fanaovana lanonana tra-maraina vao mangina ny mozika sy misaraka ny karazan’ olona mpilalao ny alina. Maro ny vahiny mandalo moa no gaga noho ny fahanginan’ny tanàna amin’ny alina. Ny olona ve no tsy tia mivoaka ka lasa mangina toy ny haolo ny tanàna hoy ny fanontanin’izy ireny matetika ? Raha mba fantany mantsy, fa toy ny olona eran-tany ny mponina eto, mba maniry koa hiala voly indraindray, eo ihany ny fahantrana ary nisy fotoana aza ny kely am-pelatanana dia ampy nanaovana « zoma mahafinaritra ». Rava ihany koa na izany fahafahan’ny vahoaka miala vonkina izany aza noho ny tsy fahaizan’ny fanjakana manefa ny adidiny. Tsy efany ny fampandrina ny filaminana, ny vahoaka no feheziny hisitrika any am-pandriana.
Vao mainka moa mitombo ny ahiahin’ny fitondrana
amin’izao fotoana andraisana vahiny izao. Tsy ny patsa iray tsy omby vava ihany no sorohana fa ny setrasetran’ny mpampihorohoro mety mampitsangam-bolo. Adiady mety hihitatra ho sangy mihoatra ny loha ka hihatra aman’aina mihitsy aza ireny fifandonana mitranga any amin’ireny toerana madinidinika fisotroana sy fandihizana na fiarahana mihirahira ireny. Fa na any amin’ireny lapan’ny mozika be olona, misy toaka lafo vidy miboiboika izay tsy mampikipy ny mpanjifa, itrangan’ny sakoroka koa rehefa mihetsika izay ny androny. Raha misy tena hampihorohoro amin’ny alina moa dia angamba ireny toerana ireny no tena kendreny fa tsy ny epi-bar sy gargôty kely eny ambany tanàna.
Mety hitombo anefa ny fahasorenana rehefa kobonina anaty ao. Tsy voadiniky ry zalahy mpitondra angamba izany fehiteny hoe fialam-boly. Mandraondraotra ny fahasorenana rehefa ela ny ela ikobonana azy ao anaty.
Taorian’ny fahamaizana: eny amin’ny Olep Ambatobe ny biraon’ny ONE 14/08/2020
Indostria: nitombo 7,5% ny taona 2019 14/08/2020
Jono an-dranomasina: manomboka tsy misy horaisina ny mpanjono madinika 14/08/2020
Mpiasa tsy miankina misoratra CNaPS: afaka mindrana 200.000 Ar hatramin’ny 500.000 Ar 14/08/2020